शरीरमा कोरोना एन्टिबडी कसरी पत्ता लगाइन्छ? – Health Post Nepal
२०७८ भदौ १६ गते १८:३३
हाम्रो शरीरमा कोरोना भाइरसको विरुद्ध एन्टिबडी बनेको छ कि छैन भनेर हेर्न सेरो प्रेभिलेन्स सर्वे गरिन्छ।
जब शरीरमा कोरोना भाइरसको सम्पर्कमा आउँछ। त्यतीबेला शरीरमा एन्टीबडी उत्पादन हुन्छ,जसले रोगसँग लड्न र हामीलाई प्रतिरक्षा गर्दछ। खोप लगाउँदा पनि शरीरमा एन्टिबडीको विकास हुन्छ।
नेपाली समुदायमा र कति प्रतिशतले विकास भयो भनेर हेर्नका लागि सेरो प्रेभिलेन्स सर्वेक्षण गरेका थियौं। यसबाट कति प्रतिशत कोरोनाबाट संक्रमित भए,कति जना कोरोना भाइरसको सम्पर्कमा आए अथवा खोपको प्रभावकारिता कति छ भनेर हेर्न मद्धत पुर्‍याएको छ।
परीक्षण कसरी गरियो?
सर्वेक्षण गर्ने भनेर निर्णय गरेपछि स्थानीय तहका प्रयोगशालाकर्मीलाई सर्वेक्षणको प्रोटोकल सम्बन्धि तालिम प्रदान गर्‍याैं। प्रयोगशालाकर्मी तथा स्वाथ्यकर्मीलाई समुहमा घरघरमा रगत संकलन गर्न पठाइएको थियौं।
त्यसपछि स्थानिय तहकै स्वास्थ्यसंस्थामा सेरम छुट्याइएको थियो। रगत सरम भनेको रगतमा भएको पहेँलो तत्व हो। त्यो छुट्याएर एन्टीबडी परीक्षण गरिन्छ। उक्त सेरमलाई चिसो ठाउँमा राखेर सुरक्षित रुपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा पुर्‍याइएको थियो।
२४ घण्टा खटिएका कर्मचारीहरुले जुनै समयमा आएको नमुनाको परीक्षण गरेका थिए। पहिलो चरणमा गुणस्तर, नमुना, बारकोडिङ ठिक छ छैन, त्यो कतिमात्राको छ, परीक्षण योग्य छ छैन सबै हेरिएको थियो।
यो सबै हेरिसकेपछि परीक्षण गर्ने बेलासम्म माइनस ८० डिग्रीसम्म चिसो पारेर राखिएको थियो। त्यसपछि यसमा एलाइजर विधिबाट परीक्षण गरिएको थियो। परीक्षण गर्दा विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा युनिसेफको मान्यता प्राप्त किटबाट परीक्षण गरिएको हो।
यसरी परीक्षण गरेर एन्टिबडी छ वा छैन भनेर पत्ता लगाइन्छ। यी सबै गतिविधि स्वास्थ्य विज्ञको निगरानीमा गरिएको हो।
तर एन्टिबडी कहिलेसम्म रहन्छ, कति लेबलसम्म भए कोरोनाबाट बचाउने र पुन संक्रमण हुनबाट बचाउने हो वा होइन अहिलेसम्म पनि थाहा छैन।
एन्टिबडी छ भन्दैमा जनस्वास्थ्यका नियम पालना गर्न कुनै ढिला नगर्न आग्रह गरेका छौं।
त्यस्तै, हाल इन्फून्जा पनि फैलिरहेका कारण सहज हुनुपदर्छ। यसका लक्षणहरु पनि कोरोना संग मिल्दोजुल्दो भएका कारण कोरोना भाइरस छ कि छैन भनेर नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गएर परीक्षण गरौं।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र तथ्यांक विभागको सहकार्यमा गत असार २१ देखि साउन अन्तिमसम्म गरी १३ हजार ७ सय जनाको रगतको नमुना संकलन गरी एन्टिबडी परीक्षण गरेको थियो ।
सर्वेक्षणबाट आएका १३ हजाार १६१ जनाको नतिजा विश्लेषण गर्दा जम्मा ६८.६ प्रतिशत नागरिकमा एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ८४.७ र सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशमा ६०.७ प्रतिशतमा एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ ।
जसमध्ये पुरुषहरूमा ६९.६ प्रतिशत र महिलामा ६७.४ प्रतिशत एन्टिबडी पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, भौगोलिक अवस्थाका आधारमा तराईका नागरिकमा ७२.४, पहाडमा ६५ र हिमाली प्रदेशका नागरिकमा ६० प्रतिशतमा एन्टिबडी विकास भएको पाइएको छ ।
त्यसैगरी कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप लगाएका ९० प्रतिशतमा एन्टिबडी देखिएको छ । पहिलो डोज खोप लगाएकामा ८० प्रतिशत र कुनैपनि खोप नपाएका ६४.३ प्रतिशतमा एन्टिबडी विकास भएको थियो।
( राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुना झाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रेस विफ्रिङमा गरेको कुराकानीमा आधारित)
One thought on “शरीरमा कोरोना एन्टिबडी कसरी पत्ता लगाइन्छ?”
Bhakta Raj says:
Pradesh 1, 3, 4,5,6 &7, Valley, Make/female ko figure pani bhannu na, Age group anusar kati?
महिलाको पनि दाह्रीजुँगा, शरीरमा रौँ! हर्मोनको गडबडी भयो कि?